Fanentanana teny Manarintsoa : azo ovahovana ny foto-tsakafo isan’andro | NewsMada
Fanentanana teny Manarintsoa : azo ovahovana ny foto-tsakafo isan’andro
Mila ovana ny toe-tsaintsika momba ny foto-tsakafo ka tsy mihinana raha tsy vary ihany isan’andro. Azo ovana ho vokatra hafa sady mora kokoa noho ny vary ny foto-tsakafo, ohatra, ny mangahazo, katsaka, akondro… Nampianarina ny mponina ao amin’ny fokontany Manarintsoa, omaly, ny fomba fahandro ny mangahazo miaraka amin’ny legioma samihafa ary ampiarahina amin’ny saosy voanjo sy ananambo mety hatao sakafo antoandro tsara. Nanampy azy ny ranomboankazo azo avy amin’ny « persil » izay samy sakafo betsaka eto amintsika avokoa. Tsy voatery mihinam-bary sy hena hatrany fa azo soloina vokatra hafa fa mitondra ny otrikaina ilain’ny vatana. Izay no hafatra ampitaina ao anatin’ny fanentanana faobe ho an’ny mponina teny Manarintsoa nandritra ny tontolo andro, hoy ny mpandrindra nasionalin’ny foibem-pirenena ho an’ny fanjarian-tsakafo (ONN), Raobelina Holy.
Ankoatra ny fampianarana mahandro ny vokatry ny tany misy, nentanina momba ny fampinonoan-dreny, fahadiovana ho an’ny ankizy sy ny olon-dehibe. Betsaka ny tokantrano miatrika fahasahiranana ara-pivelomana ka tsy ampy ny vola entina mividy sakafo sahaza. Vahaolana ny fampahafantarana azy ireo ny sakafo ara-pahasalamana nefa tsy lafo.
Nizara sakafo masaka ho an’ny olon-dehibe 1 000 sy zaza 500 ny tomponandraikitry ny ONN ka afaka nanandrana ny isan-tokantrano ny tsiron’ny mangahazo nasiana legioma sy saosy. Koba aina kosa, nampiana « zaza tomady » ho an’ny kilonga madinika.
5 000 Ar isan’andro ny vola ilaina amin’ny sakafo
Ho an’ny Charline eni-mianaka, 5 000 Ar isan’andro no ilaina hividianana laoka sy vary. Indray mandeha isan-kerinandro no mihinana hena kely fa matetika anana no avadibadika ho laoka. Rehefa tsy misy ny karama amin’ny sasa lamba, vary sosoa no omena ny ankizy. Hitany tamin’ny fampianarana nataon’ny ONN fa azo soloina mangahazo ny vary ka hampihatra ny lesona azony izy manomboka amin’ny herinandro ambony.